Bit By Bit - Ịmepụta mmekọrịta ọnụ - 5.3.4 Mmechi
Oku a na-akpọ na-enyere gị aka ịchọta ngwọta maka nsogbu ndị ị nwere ike ikwu n'ụzọ doro anya ma na ị nweghị ike idozi onwe gị.
Atọ a niile oghe oku na-aga oru ngo-Netflix Nrite, Foldit, ọgbọ na-Patent-eme nnyocha jụrụ ajụjụ nke a kpọmkwem ụdị,-achọ ihe ngwọta, wee họrọ nke kacha mma ngwọta. The eme nnyocha emeghị ọbụna mkpa ka ị mara ihe kasị mma ọkachamara na-arịọ, na mgbe ụfọdụ ndị ezi echiche si na-atụghị anya ebe.
Ugbu a, enwere m ike ịmepụta ọdịiche dị mkpa dị n'etiti ọrụ oku na-emeghe na ọrụ nchịkwa mmadụ. Nke mbụ, na ọrụ na-emeghe oghere, onye nchọpụta ahụ kwuru ihe mgbaru ọsọ (dịka, ịkọwa ihe nkiri fim), ebe ọ bụ na nyocha mmadụ, onye na-eme nchọpụta na-akọwapụta microtask (dịka, ịmepụta ụyọkọ kpakpando). Nke abụọ, na oku na-emeghe, ndị na-eme nchọpụta chọrọ enyemaka kacha mma-dị ka ihe kacha mma algorithm maka ịkọ ihe nkiri nkiri, usoro nhazi nke kachasị ike nke protin, ma ọ bụ akụkụ kachasị mkpa nke nkà-ọ bụghị ụdị nchịkọta dị mfe nke ihe niile onyinye.
N'ihe ederede n'ozuzu nke oku na-emeghe na ihe atụ atọ ndị a, olee ụdị nsogbu dị na nyocha ndị mmadụ nwere ike dabara adaba maka ụzọ a? N'oge a, m ga-ekweta na e nwebeghị ọtụtụ ihe ịga nke ọma ma ọ bụ (maka ihe ndị m ga-akọwa n'otu oge). N'ihe banyere analogs kpọmkwem, onye nwere ike iche na ịmepe emepe nke Peer-Patent bụ onye onye na-eme nchọpụta akụkọ na-achọ akwụkwọ mbụ iji kọọrọ otu onye ma ọ bụ echiche. Otu oku na-aga n'ihu na ụdị nsogbu a nwere ike ịba uru karịsịa mgbe akwụkwọ ndị dị mkpa adịghị na otu nchekwa ma ha kesara.
N'ikpeazụ, ọtụtụ gọọmenti na ụlọ ọrụ nwere nsogbu ndị nwere ike ịmepe imeghe oku n'ihi na oku nwere ike ịmepụta algọridim nke a pụrụ iji maka amụma, amụma ndị a nwere ike ịbụ ihe nduzi dị mkpa maka mmemme (Provost and Fawcett 2013; Kleinberg et al. 2015) . Dịka ọmụmaatụ, dị ka netflix chọrọ ịkọ ọkwa na fim, gọọmenti nwere ike ịchọrọ ịkọpụta ihe ndị dị ka ụlọ oriri na ọṅụṅụ nwere ike ịmebi iwu ike iji nyefee nlezianya nyocha. Site na ụdị nsogbu a, Edward Glaeser na ndị ọrụ ibe ya (2016) ji oku na-emeghe iji nyere obodo Boston aka ịkọ ihe oriri na-edozi ụlọ ọcha na ihe eji eme ihe ọcha na-adabere na data site na Yelp nyocha na nnyocha nyocha akụkọ ihe mere eme. Ha mere atụmatụ na akara ngosi nke ga-emeri oku a na-emeghe ga-eme ka ndị nlekọta ụlọ oriri na ọṅụṅụ nweta ihe dị ka pasent 50.
A pụkwara iji oku a na-akpọghe iji tụnyere ma nyochaa chepụtara. Dịka ọmụmaatụ, Ụlọ Ndị Na-adịghị Mma na Ọmụmụ Ihe Ọmụma Ụmụaka achọpụtawo ihe dịka ụmụaka 5,000 kemgbe amụrụ ha na obodo 20 dị iche iche (Reichman et al. 2001) US (Reichman et al. 2001) . Ndị nchọpụta anakọtara data banyere ụmụaka ndị a, ezinụlọ ha, na ebe ha sara mbara mgbe a mụrụ ha na afọ 1, 3, 5, 9, na afọ 15. N'inye ihe omuma banyere umu a, olee ndi ndi nyocha choputara dika ndi gucha akwukwo ulo akwukwo? Ma ọ bụ, e gosipụtara n'ụzọ ga-adọrọ mmasị ụfọdụ ndị nchọpụta, nke data na echiche dị iche iche ga-adị irè karị n'ịkọwapụta ihe ndị a? Ebe ọ bụ na ọ dịghị otu n'ime ụmụaka ndị a ka ha ruru eru ịga mahadum, nke a ga-abụ ezi amụma dị n'ihu, ọtụtụ usoro dị iche iche ndị ọkachamara nwere ike iji mee ihe. Onye na-eme nchọpụta bụ onye kwenyere na agbata ndị dị oké egwu na ịmepụta ndụ nwere ike ịbịaru nso, ebe onye na-eme nchọpụta na-elekwasị anya na ezinụlọ nwere ike ime ihe dị iche. Kedu n'ime ụzọ ndị a ga-arụ ọrụ ka mma? Anyị amaghị, na usoro ịchọta, anyị nwere ike ịmụta ihe dị mkpa gbasara ezinụlọ, agbata obi, agụmakwụkwọ, na enweghị mmekọrịta. Ọzọkwa, a pụrụ iji amụma ndị a mee ihe iji duzie nchịkọta data nchịkọta n'ọdịnihu. Were ya na e nwere ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị gụsịrị akwụkwọ na mahadum bụ ndị a na-atụghị anya ka ha gụchaa akwụkwọ ọ bụla; ndị a ga-abụ ezigbo ndị na-eme ihe nyocha maka qualitative na ịchọta ụkpụrụ omume. Ya mere, na ụdị oku a na-emeghe, amụma agaghị abụ njedebe; kama nke ahụ, ha na-enye ụzọ ọhụrụ iji tụnyere, ịba ụba, ma jikọta ọdịbendị dị iche iche. Ụdị oku a na-akpọghe abụghị kpọmkwem maka iji data sitere na Ezinụlọ Ndị Na-adịghị Mma na Nyocha Ọmụma Ụmụaka na ịkọ onye ga-aga kọleji; enwere ike ịkọwa ihe ọ bụla ga-emesị chịkọta na oge ọ bụla gbasara data nchekwa.
Dị ka m dere na mbụ na nkebi a, enwebeghị ọtụtụ ihe atụ nke ndị na-eme nchọpụta mmadụ na-eji oku emeghe. Echere m na nke a bụ n'ihi na ịkpọghe oku adịghị adabara n'ụzọ ndị ọkà mmụta sayensị na-ajụ ajụjụ ha. Ịlaghachi na Nrite Netflix, ndị ọkà mmụta sayensị agaghị achọkarị ịkọ ihe ụtọ; kama nke ahụ, ha ga-ajụ maka otu ihe kpatara ọdịiche ọdịbendị dị iche iche maka ndị mmadụ si dịgasị iche iche nke ọha mmadụ (lee eg, Bourdieu (1987) ). Ụdị "esi" na "ihe mere" ajụjụ anaghị ebute ngwọta dị mfe, ya mere, ọ dị ka ọ dị njọ imeghe oku. Ya mere, ọ na-egosi na oku na-emeghe ga-adabara maka amụma ịjụ karịa ajụjụ nke nkọwa . Otú ọ dị, ndị na-eme ihe nkiri n'oge gara aga akpọwo ndị ọkà mmụta sayensị ka ha chegharịa banyere nkọwa ahụ dị n'etiti nkọwa na amụma (Watts 2014) . Ka akara dị n'agbata amụma na nkọwa dị njo, ana m atụ anya na oghere ndị a na-emeghe ga-esiwanyewanye n'ọmụmụ mmadụ.